Burger chef | Thingangyun | Yangon | yathar
We are temporarily closed! Street food ကို Upgrade လုပ်​ထားတဲ့ဆိုင်​​လေးပါ Organic ဘဲသုံးပြီးသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုအာမခံပါတယ်အထူးအော်ဒါများလည်း လက်ခံပါသည်။ order မှာယူလိုပါက နှစ်ရက်ကြိုတင်မှာယူပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။ခဲပုံတူပန်းချီရေးဆွဲခြင်းလည်း လက်ခံပါသည်။ ပန်ချီကို ချစ်ခင်ဝါသနာပါသူများအတွက် ရေဆေးပန်းချီကားများ ရှိပါသည်ခင်ဗျာ။
Address No.(375-A) Pyithaya Street, Thingangyun Township, Thingangyun, Yangon
Access Near Waizayantar road and Pyithayar road traffic light
Opening date 2018.11.11
Genre Yangonese , Hamburger , Grilled meat , Tea , Cafe , Fruit parlor , Sandwich , Hamburger shop , Natural , Take-out Delivery
No.(375-A) Pyithaya Street, Thingangyun Township, Thingangyun, Yangon
Aung Pyai Sone
Delicious and Fresh and Taste Foos
2019.07.02 Dinner 2,500-5,000 5
Good taste and fresh burger and sandwiches.